We.com.mm - Super Glue နဲ့ ကပ်မိရင် အရေးပေါ် ဘာလုပ်သင့်သလဲ
ကပ်အားသိပ်ကောင်းတဲ့ Super Glue ( အရပ်အခေါ် ဆင်ကော် ) ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ မရှိမဖြစ်မဟုတ်ပေမဲ့ တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရာဝတ္ထု အသုံးအဆောင်တွေ ကျိုးပဲ့ ပြုတ်ပျက်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ အလွယ်တကူပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ ဆင်ကော်ကို သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အရာဝတ္ထုတွေကို ပြင်ဆင်တဲ့အခါ တကယ် အသုံးဝင်သလောက် အရေပြားနဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါတွေမှာ ကပ်မိတဲ့အခါကျတော့ သူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးက မသေးပြန်ပါဘူး။ ဒီတော့ Super Glue နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ ထိတွေမိပြီး ကပ်သွားတဲ့အခါ တတ်နိုင်သမျှ အန္တရာယ်နည်းစေဖို့ လု်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
အရေပြားမှာ ကပ်ခဲ့သည်ရှိသော်. . .
စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲပြီး ကပ်နေတဲ့အရေပြားကိုဇွတ်ဆွဲခွာတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။အရေပြား ထိခိုက်ပွန်းပဲ့နိုင်ပါတယ်။ လုပ်သင့်တာကတော့ ကပ်နေတဲ့နေရာကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ (Vegetable oil) ရွှဲရွှဲလူးပေးထားပါ။ အဲဒါမရှိရင် ဆပ်ပြာနဲ့ရေနွေးနွေးနဲ့ စိမ်ထားပါ။ အရေပြားကို ရှေ့နောက်အသာအယာ ပွတ်ဆွဲလှိမ့်ပြီး အနားတွေကစပြီး ကပ်နေတဲ့ကော်ကို ငြင်ငြင်သာသာခွာကြည့်ပါ။ တစ်ခါနဲ့မရရင် ဆီပြန်လူးပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ချောမွတ်တဲ့ပစ္စည်းတခုခု (ဥပမာ ခဲတံ, ဘီး) ကို ကပ်နေတဲ့ကြားကထားပြီး အသာဆွဲဟကြည့်ပါ။ခွာလို့ရသွားပြီးရင်ခြောက်သွေ့အက်ကွဲတာကာကွယ်ဖို့ အစိုဓာတ်ထိန်းတဲ့ ခရင် တခုခုလိမ်းပေးပါ။
မျက်စိထဲ ဝင်ခဲ့သည်ရှိသော်. . .
မျက်ခွံကိုဇွတ်ဆွဲမခွာပါနဲ့ဒဏ်ရာရသွားနိုင်ပါတယ်။ ကော်ဝင်သွားတဲ့မျက်စိကိုရေနွေးနွေးနဲ့ချက်ချင်းဆေးပါ။ ရေဆွတ်ထားတဲ့အဝတ် သို့ ပတ်တီးနဲ့ အသာအုပ်ထားပြီး မျက်စိဆရာဝန်ထံ သွားပါ။ တကယ်လို့ ပြစရာမျက်စိဆရာဝန်မရှိရင်လည်း ပြာပြီး လုပ်မိလုပ်ရာမလုပ်ပါနဲ့။ များသောအားဖြင့် ၁-၄ ရက်အတွင်း အလိုလို ပြန်ပွင့်လာတတ်ပါတယ်။
ဆံပင်နဲ့ဦးရေပြားကို ပေခဲ့သည်ရှိသော်. . .
ရေနွေးနွေးနဲ့ခေါင်းလျှော်ပါ။ Vegetable oil ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ သို့ Body oil ကိုယ်လိမ်းဆီ တမျိုးမျိုး ရွှဲရွှဲလူးပေးပါ။ တရက် နှစ်ရက်နေရင် အလိုလိုကွာကျသွားပါမယ်။ သိပ်လုံးထွေးနေရင် ဆံပင်ကို အသာလေး ရိတ်ပစ်လို့ရပါတယ်။
ပါးစပ်နဲ့နှုတ်ခမ်းကို ပေခဲ့သည်ရှိသော်. . .
ဇွတ်ဆွဲမခွာပါနဲ့၊ ရေနွေးများများနဲ့ အသာဆေးပါ။ ပါးစပ်ထဲကပ်နေတဲ့ကော်ကို ပါးစပ်ထဲကသွားရေနဲ့ပဲ စိုအောင်လုပ်ပြီး လျှာကပွတ်တွန်းပေးပါ။ တစ်ရက်နှစ်ရက်နေလို့ ကွာလာတဲ့အခါမှာတော့ မြိုမချမိဖို့ သတိထားရပါမယ်။
ကဲ. . . ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ စူပါဂလူးကပ်တဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲဆိုတာ သိလောက်ပြီနဲ့တူပါတယ်။ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ဆင်ကော်ကို သုံးလေ့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်လေးတွေကို သေချာမှတ်ထားပေးနော်. . .။
ဆေးဖက်ဝင်ရုံသာမက ငွေဝင်စေတဲ့ ပင်စိမ်းရွက်